Iimpahla zeBooster Booster | I-Androidsis
I-DX Battery Booster, yenza ulawulo lwebhetri yakho
UFrancisco Ruiz | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Ibhetri
I-DX iBooster Booster yenye yezo zicelo ze Play Store ukuba xa udibana naye ngekhe uphinde uphile ngaphandle kwakhe efowuni.
Njengazo zonke izicelo ezilungileyo ezikwi- Play StoreIineenguqulelo ezimbini, enye isebenza ngokupheleleyo kwaye enye isimahla enezithintelo ezithile, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba kukho isicelo esinexabiso lobunzima begolide kwaye kubalulekile ukuba uthenge uhlobo lwenkqubo, le imeko yesicelo esiveza apha ngezantsi.
I-DX iBooster Booster, iya kusinceda silawule ngendlela efanelekileyo ngokupheleleyo ukusetyenziswa kwebhetri yesiphelo sethu ngenkqubo yokusebenza AndroidNgale sicelo intle, siya kuba nesixhobo esipheleleyo esinokuthi senze iiprofayili ezininzi ukuzisebenzisa ngokuzenzekelayo, ukusukela sinako ukwenza ngokwamanqanaba ebhetri okanye ishedyuli, ukongeza, siya kuba nenketho eluncedo kakhulu eya kuthi isincede siqhubeke nokugcina ibhetri, siphumeza isigxina kunye nokukhupha kunye umjikelo opheleleyo wentlawulo.
Iimpawu eziphambili zesicelo
Okulandelayo ndiza kuyaphula ezona zinto zintathu ziphambili zalesi sicelo simangalisayo:
Kweli candelo lokuqala lesicelo, elibiziweyo battery, siya kufumana idatha ibalulekile njenge iprofayili esiyisebenzisayo, okanye ixesha lebhetri esilishiyileyo sisebenzisa iprofayile esele ikhankanyiwe, kunye nokwahlulwa kwamaxesha aseleyo ngokweenkonzo esizisebenzisayo Android.
Kananjalo ukuba sicofa ukhetho Smart, sinako ukucwangcisa amaxesha apho i-terminal ingena khona kwimowudi iswitshi, ngenxa gcina ibhetri eseleyo kangangoko, sinokuzikhetha kwaye sizicwangcise ngokwenqanaba lebhetri okanye ngeshedyuli esekwe sithi ngaphambili, enye inketho ekhoyo ngaphakathi kweSmart, kukuthoba ngokuzenzekelayo isantya seprosesa, eyaziwa njenge UnderCloking.
Inketho yesibini ngaphakathi kwimenyu yesi sicelo, kukho ifashoni, Ukusuka apho siya kuba neeparamitha ezininzi zokumisela ukufezekisa owona msebenzi mhle webhetri ngokweemeko zethu ezikhethekileyo kunye nokusetyenziswa kwethu kwesixhobo.
Ukusuka kolu khetho, sinokukhetha enye yeefayile ze- Iinkangeleko ezichazwe kwangaphambili ngesicelo ngokwaso, okanye yenza iprofayili enye okanye ezingaphezulu zobuqu Ngokweemeko ezahlukeneyo zokuzisebenzisa, ngolu hlobo. umzekelo singenza iprofayili yasebusuku, enye iprofayile xa sisemsebenzini, njl, njl ... Ke iiprofayili ezininzi njengoko sifuna.
Inketho elandelayo endiza kuthi ndihlomle ngayo, ngumnxeba Ukutshaja, kwaye sisixhobo esiluncedo kakhulu se- yenza ibhetri kwesixhobo sethu, nayo, nangalo lonke ixesha sidibanisa itheminali kwitshaja xa ingezantsi kwe- 20 por ciento, iya kusihlawulisa njengomjikelo opheleleyo, oluncedo kakhulu kulondolozo olululo lwebhetri.
Kukulungele ukwenza umjikelo opheleleyo wentlawulo, malunga kanye ngenyanga.
Inketho yokugqibela yi Ukubeka iliso kubo bonke oovimba besiphelo sethuUkusuka kuyo sinokubona zombini iinkqubo kunye nokusetyenziswa okuvulekileyo kunye nezixhobo zebhetri abazisebenzisayo.
Enye into andifuni ukulibala ukukuxelela, lukhetho lokubeka uhlobo lwe Umsebenzi ngendlela ye widget, ethi xa siyicinezela, ibulale zonke iinkqubo ezingeyomfuneko kunye nokusetyenziswa kweopopayi entle njengempembelelo yokujikeleza iiwijethi ezimbini ukulawula usetyenziso kwiscreen esikhulu, kunye isaziso kwibar yomsebenzi ngalo lonke ulwazi eminwe yethu ngokushenxisa ibha.
Ukuza kuthi ga ngoku ukwaphuka kwezona ndawo zibalulekileyo zale sicelo, kukufanele ukuchitha ntoni 2,30 IiYuro Ixabisa ntoni le sicelo?
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ukusetyenziswa kakhulu kwebhetri? Ingcaciso nesisombululo.
Khuphela-iBrooster Booster pro, iBooster booster simahla
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ibhetri » I-DX Battery Booster, yenza ulawulo lwebhetri yakho
Masizame, ukuba ndiyifumana simahla, ngcono, kodwa ke hlawula ngoku iJuice Defender kunye neGreen Power kwaye bayagcina, kuba yile ndlela, kodwa ukuchitha kwimemori kwaye abanye baphantse bahlawule oko bakufumanayo, inyaniso, nangona inyani ukuba uqwalasele izinto ezithile Luxabiso olukhulu, ngokwenene.
Apha basebenza ngokupheleleyo kwaye simahla.
Ayindikhuthazi, iyabhidisa kwaye ayisebenzi kangako, inyani, ekuphela kwento esebenzayo ngumjikelo womthwalo, kungenjalo kukho iiapps ezingcono nezigqibeleleyo.
Le yeyona ilungileyo ikhona, kwaye ndiyakuxelela ukuba ndizamile zonke.
Nimbu nguM sitsho
Ukudlala kuGoogle akukho
Phendula uNimbu kwi-MG
Umdlali odadayo, iPop-up Dlala ividiyo edlalwayo